Waa Maxay Calaamdaha Nolosha? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Calaamadaha nolosha waxaa lagu cabbiraa shaqooyinka aas aasiga ah ee jirka uu qabto. Waxaa jiro Afar calaamadood oo muhiimka ah oo ay si joogtada ah u kormeeraan bixiyaasha daryeelka caafimaadku waxayna kale yiihin :
• Heel-kulka jirka ( Temprature).
• Cadaadiska dhiigga (Blood pressure).
• Wadnaha garaaca (Pluse) iyo
• Neefsashada ( Respiration).
Calaamadahaani waxay waxtar u leeyihiin ogaanshaha ama la socodka dhibaatooyinka caafimaad. Waxaa lagu cabbiri karaa goobaha caafimaad, guriga, iyo meel kasta ay ka dhacdo xalaad caafimaad daro oo dag-dag ah. Waxaa cabbiri karo qof waliba oo aqoon u leh, waana muhiim in uu qof waliba barato.
Heel-kulka jirka wax-yaallaha saameyo waxaa kamid ah: Jinsiyadda qofka midka uu yahay Rag ama Dumar, Da’ahaan inta uu jiro, shaqada uu qabto iyo cunnada uu cunno.
Heer-kulka waxaa laga rabaa cabbir ahaan in uu noqdo inta u dhexeysaa 35.5-37.5cO Waxaana laga cabiraa meelaha kale ah: Afka, Malawadka, Kilkilsha, iyo dhagta korkeeda. waxaana lagu cabbiraa mashiin yar oo loo yaqaano (Thermometer).
Cadaadiska Dhiigga waa mid muhiim u ah nolosha. Qof caafimaadka qabo cadaadiska dhiigiisa waxaa laga rabaa in uu noqdo inta u dhexeyo 100-120 dhiigga kore 80-70mmHg dhiigga hoose. haddii u jiri lahayn cadaadiska dhiigga oksijiin iyo nafaqo ma gaari lahyn dhammaan unugyadda jirka.
Wadna-garaaca waa mid kamid calaamadaha nolosha waxaana lagu cabbiraa daqiiqaddii inta uu garaacmo. Dadka waa kuwa ku kale gadisan wadna-garaaca marka loo eggo: Da’da, jawiga qofka uu ku jiro sida cabsida, xanaaqa farxada. Iyo xanuunka.
Wadna-garaac waxaa laga cabbiraa meelo badan oo kamid yihiin gacanta qeybteeda kale goyska oo ku aadan suulka oo loo yaqaano camaacum. Waxaa lagu cabiri karaa gacanta caadiga ah, Adigoo waliba saaraayo labbo farood camaacumta dusheeda ka dib waxaad tirineysaa wadna-garaac aad halkaas ka maqli doonta, Adigoo waliba qabsanayo 1 daqiiqo.Qofka qaangaarka oo caafimaadka qabo waxaa laga rabaa halkii daqiiqo waliba in uu garaacmo inta u dhexeysa 72-100 jeer.
Neefsashada waa dhaqaaq hawada ay ka sameyso sanbabada marka uu jirka qaaddanaayo oksijiinta iyo waliba marka uu iska soo saaraayo hawada jirka uu isticmaalay oo loo yaqaano karbondhay-oksaaydh(carbon dioxide).
Waxaa laga rabaa qofka caafimaadka qabo oo qaan gaarka ah in uu halkii daqiiqo u neefsado inta u dhexeyso 12-24jeer. Caruurta lamid ah dadka waaweyn oo waa ay ka neefsi badan yihiin sababtoo ah waxaa ay ku jiraan korniin.
Tags: Waa Maxay Calaamdaha Nolosha?
Next post Asaasaha Wikileaks, Julian Assange oo maanta Maxkamad lasoo taagayo, Maxaase Lagu Haystaa?
Previous post Xanjada iyo Waddanka Singabuur!